1. Voalohany indrindra dia mila manadihady raha toa ka mahazatra sy azo itokisana ny mpanamboatra. Raha ny marina, ny indostrian'ny boatin-jaza dia tsy dia lafo loatra amin'ny vidin'ny marika toa ny vokatra FMCG hafa, ka tsy misy vidiny mitovy amin'ny vidiny. Noho izany dia zava-dehibe ny fijerena ny varotra mialoha sy varotra a ...
Ny 20 jona 2020 dia nanangana elanelana fitantanana orinasa sy famokarana orinasa ny orinasa hanatontosa fiofanana mandritra ny roa andro sy iray alina. Tamin'ny alàlan'ny hetsika isan-karazany, lasa ekipa iray izay afaka mifampatoky izahay, mahita zava-manahirana sy mamaha olana. Ny fikirizantsika ny handresy ny olana dia tsy nisy ...
Ny tabilao plastika misy plastika dia antsoina koa hoe Board ofongong, board corrugated, sns. Izy io dia fitaovana vaovao misy lanja maivana (firafitra diso), tsy misy poizina, tsy fandotoana, tsy fahita rano, tsy mahatanty, anti-fahanterana, miorim-bolo ary loko manankarena. Fitaovana: Ny akora akora amin'ny birao goavambe dia PP, antsoina koa ...
Ny tombony amin'ny zana-baravarana
1. vidiny ambany Ny voalohany dia ambany noho ny fitaovana hafa ny vidin'ny kitapo plastika goavambe. Izy io dia hamonjy be dia be ny vidiny mandritra ny dingana ny fividianana fitaovana vita amin'ny vokatra vita. 2. Ny vokatra maivana maivana vita amin'ny plastika board matevina dia maivana ...
VAOVAO TEKNOLOHY OLONA ---- INDRINDRA INDRINDRA? Ny kitapo fantsom-pifandraisana dia fivoriambe miaraka amina tariby maro mifarana na mifamatotra. Ireny fihaonana ireny dia manamora ny fametrahana mandritra ny famokarana fiara. Izy ireo al ...